साधारण नागरिकहरु तेजपात को ठूलो बहुमत - एक मसला, खुशबूदार, सूप लागि उपयुक्त, को जाडो लागि मासु तयारी। एक Laurel पुष्पांजलि पुरातन समयका देखि विजेता पहनाया कि सोच्छ। तर तेजपात लोशन को के, छाला हेरविचार मा मद्दत गर्छ निश्चित, धेरैले लागि थाह छ।
लौरेल रूख - प्रेम, विजय र स्वाद को एक प्रतीक
प्रेमको स्मृति मा रूख - ग्रीक पौराणिक कथाहरु, को Laurel अनुसार। प्रिय Apollona Dafna, को कष्टको थकित उनको मन सुन्दर भगवान राम्रो छैन, एक Laurel रूख मा गरिएका आफ्ना प्रिय को स्मृति मा पहना र अपोलो बन्न कि पात को पुष्पांजलि। लौरेल रूख लामो सौन्दर्य, सफलता, विजय को एक प्रतीक भएको छ। लौरेल पात कोठा एक सूक्ष्म ताजा गंध दिने मात्र होइन विजय माला, तर पनि साधारण घरमा सजाउनु। को pore देखि Laurel पात र twigs विभिन्न पाक व्यञ्जन लागि एक खुशबूदार मसला रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
पातहरु र प्राचीन एजेन्ट decontaminating रूपमा प्रयोग स्टील Laurel रूखको फल - हङ धूम्रपान अप्रिय odors को छुटकारा प्राप्त गर्न, र उबला शोरबा एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने रूपमा प्रयोग भएको थियो। आधुनिक अनुसन्धान पात र सक्रिय घटक को Laurel ठूलो संख्या को फल को उपस्थिति पुष्टि गरेको छ। यो बोट मा आवश्यक तेल, अस्थिर, टेन्निसको, तीता, फैटी एसिड, भिटामिन समावेश र तत्व पहिल्याउन। खाडी छोड्छ र फल व्यापक अन्तस्करणले, जोइन्टहरूमा, मधुमेह र एलर्जी को उपचार को लागि प्रयोग गरिन्छ। यो वैज्ञानिक बे पात को आधार मा लागूपदार्थ रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्ध छ:
साथै, Laurel को decoctions र infusions भोक वृद्धि र पाचन सुधार गर्न एक माध्यम रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को यस्तो लोक औषधि रक्तचाप कम गर्ने क्षमता छ। परम्परागत औषधीको प्रयोग गर्दा, हर्बल उपचार contraindications, साथै परम्परागत औषधीको छ भनेर सजग हुन। Decoctions, पात वा Laurel रूख फल आधारित tinctures गर्भावस्था र स्तनपान, गैस्ट्रिक अल्सर र ग्रहणी अल्सर, पुरानो कब्जियत, आक्रान्त विकार, को तीव्र र क्रोनिक फारममा गुर्दे रोगहरु समयमा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको छैन। यो सबै ती वा अन्य समस्या उपचार मा एक decoction, जलसेक वा तेजपात लोशन प्रयोग गर्न निर्णय मा खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
cosmetology मा तेजपात
को Laurel पात र फल मा देखि टेन्निसको, फैटी एसिड समावेश, र तिनीहरूले जीवाणुरोधी गतिविधि र प्रयोगको मुखासे उपचार गर्न, मुखासे। laurels आधारित औद्योगिक कस्मेटिक उत्पादनहरु धेरै छैन, तर तिनीहरूले घर मा गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, लीफ्स लोशन देखि सुनिंनु को प्रभावकारी कस्मेटिक प्रदान गर्नेछ।
को लोशन लागि कच्चा माल
खाडी ट्री - न्यानो छेउको एक निवासी। भू-मध्य, क्रास्नोडार क्षेत्र, को काकेशस, तर Subtropical जलवायु को कुनै पनि क्षेत्र मा, तपाईं यो रूख देख्न सक्छौं। क्षेत्रहरु वा देशहरूमा मौसम को अनन्त वसन्त र गर्मी हुन्छन् जहाँ छैन, एक तेजपात को मसला खण्डमा पसलहरुमा खरिद गर्न सकिन्छ। र तपाईं बजार मार्फत हिंड्न र पात संग लगभग ताजा छानिएको शाखा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि मामला मा, कस्मेटिक लोशन र concoctions को तयारी दुवै ताजा र सुकेका प्रयोग गर्न सकिन्छ लागि छोडेर। Laurel को लोशन को मुखासे निर्धारण फरक हुन सक्छ, बाहिरी समस्या समाधान गर्नेछ मा छोड्छ। सुकेको जडीबुटी र फूल, आवश्यक तेल र भिटामिन - साथै, औषधि पसल lavrushki को आधार मा कस्मेटिक उत्पादन पूरक गर्न सक्ने थप सामाग्री को एक किसिम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी रक्सी पिउने लोशन तयार?
Laurel पात को घर प्रभावकारी लोशन मा खाना पकाउनु, तपाईं एक विशेष परिस्थितिको उपयुक्त छ कि कुनै पनि नुस्खा चयन गर्न सक्नुहुन्छ। Laurel रूखको पात पछि धेरै औषधीय र कस्मेटिक सुविधाहरू छ। तिनीहरूले मुखासे, सुनिंनु, राता संग संघर्ष गर्दै छन्, अनुहारको रुप रंग सुधार, विरोधी-बुढ्यौली भिटामिन संग छाला nourishes। को लोशन तेजपात को मुखासे लागि धेरै प्रभावकारी छ तयार गर्न, तपाईं निम्न नुस्खा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एक 100 ग्राम लीफ्स र वोदका को आधा लीटर तयार। पात तोड्न, तर crumble छैन, एक गिलास जार मा राख्नु र वोदका खन्याउन। कस ढक्कन बन्द र3हप्ता फ्रिज मा जार हटाउन। सामग्री बैंकहरू तनाव cheesecloth र निचोड मार्फत। को लोशन तयार छ! यो धेरै ध्यान छ र प्रभावकारी सुनिंनु totality combats, यो एक कपास swab मात्र डण्डीफोर प्रयोग लागू हुनुपर्छ! धब्बा सबै आफ्नो अनुहार माथि त तपाईं, तपाईं रिसले प्राप्त गर्न सक्छन् गर्न सक्छ।
भिटामिन बे लोशन
Laurel पात को अनुहार लागि भिटामिन लोशन शोरबा आधारमा तयार गरिएको छ।5ठूलो खाडी कागज तौलिया मा धुने, सुक्खा छोड्छ। एक तामचीनी कचौरा राख्नु र 400 एमएल को राशि पानी उम्लिरहेको खन्याउन। आगो राखे, एक फोडा, कभर गर्न ल्याउन र 3-4 मिनेट को लागि जोश। कचौरा गर्मी बन्द र कोठा तापमान मा शांत राखे। को शोरबा cooled छ, एक तंग ढक्कन संग एक गिलास बोतल मा खन्याउन। प्रति उपलब्ध छन् जो तरल शोरबा भिटामिन ए र ई को 10 एमएल, थप्नुहोस्। बन्द र बोतल मिलाउ। को घटक समान वितरण हुन्छ भनेर प्रत्येक प्रयोग गर्नु अघि, बोतल सामग्रीहरू, हल्लाइन्छ हुनुपर्छ। एक कपास swab समस्या क्षेत्रमा एक दिन 2-3 पटक कारण, यो उपाय सुनिंनु को लागि हुनुपर्छ प्रयोग गर्नुहोस्।
छाला supple र taut छ - एक वाहन भिटामिन त यो क्षमता प्रभावकारी toning गर्न प्राप्त हुनेछ, चिया रूख तेल प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। तेजपात र चिया रूख तेल आधारित एजेन्ट जलन को डर बिना, सबै छाला भन्दा लागू गर्न सकिन्छ।
Lavrushko संग थप कस्मेटिक्स
अर्को कस्मेटिक घर उपकरण chamomile र तेजपात प्रयोग गर्दछ। लोशन नुस्खा सरल छ:
100 GR। Laurel;
200 GR। chamomile;
पानी उम्लिरहेको को 1 लीटर।
उम्लिरहेको पानी chamomile र lavrushki, कवर को मिश्रण खन्याउन र कोठा तापमान मा शांत गर्न अनुमति दिन्छ। फाटो र परिणामस्वरूप जलसेक squeeze। एक सुन्दर, छायादार ठाउँमा एक गिलास जार मा भण्डारण गर्नुहोस्। अनुहार दल्नु र कपास प्याड प्रयोग गरेर घाँटी, बिहान र साँझ एक सफाई एजेन्ट रूपमा लोशन प्रयोग गर्नुहोस्।
शोरबा आधारमा हालतमा BRacing
लीफ्स देखि तयार शोरबा एक रोचक तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। केही लौरेल, सामान्य पानी मा जोश छोडेर सुन्दर र ककटेल बरफ घन को तयारी को लागि एक कन्टेनर मा खन्याउन। स्थिर। आवश्यक, तपाईं तुरुन्तै छाला स्वस्थ रंग, मज्जा पुनर्स्थापना गर्न आवश्यक गर्दा, फ्रीजर बाहिर एक घन मिल र तिनीहरूलाई अनुहार, घाँटी, décolleté र हात RUB। Laurel पात को बरफ घर लोशन प्रभावशाली समीक्षा हुन्छ। कति महिला भन्छन्, प्रभाव आश्चर्यजनक छ - छाला बढी लोचदार, पनि सानो झुर्रियाँ एक समय को लागि गायब बन्न गुलाबी गर्दछ।
मात्र छैन मुखासे लागि तर पनि freckles लागि
लीफ्स को लोशन विभिन्न घटक संग पूरक गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, ताजा ककडी रस को शोरबा वा जलसेक थप्नुहोस्। शोरबा तयार lavrushki एक कप मा खन्याउन, यो ताजा ककडी रस, बस एक चमचा squeeze - यो अनुप्रयोग अघि सबै भन्दा राम्रो बनाउन। राम्रो मिश्रण र एक कपास swab संग अनुहार हटाउन। यो उपकरण मात्र होइन सुनिंनु र मुखासे हटाउन, तर पनि freckles discolor सक्षम छ। र कस्मेटिक उत्पादन को प्रभाव धेरै नियमित आवेदन पछि सजिलै देखिने हुनेछ।
घर कस्मेटिक्स अक्सर छाला को ताजगी र बनाउनसमेत प्रयोग गरिन्छ। अक्षय कच्चा माल मा मुख्य रूप तयार तिनीहरूले, संक्षारक सामाग्री समावेश छैन। उदाहरणका लागि, लीफ्स को स्थलहरू देखि नै लोशन। केवल राम्रो छोडेर उहाँको बारेमा पनि व्यावसायिक beauticians समीक्षा। यो सक्रिय अर्थ सुनिंनु र मुखासे को समस्या combats, राता हटाउँदछ। पानी कस्मेटिक्स lavrushki यो सुक्खामा छैन, राम्रो स्वस्थ अनुहारको रुप रंग कायम भिटामिन संग छाला saturating र तत्व पहिल्याउन मद्दत गर्छ। व्यावसायिक सहयोगीहरूले को सौन्दर्य को एक सानो गोप्य: माटो मास्क निर्देशनहरू मा वर्णन गरिएको छैन रूपमा पानी, र जडीबुटी एक decoction संग पतला गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि,5लीफ्स पानी, सुन्दर र फिल्टर, र त्यसपछि पतला माटो मास्क को 100 एमएल केही मिनेट लागि जोश छोडेर। यस्तो प्रक्रिया को प्रभाव धेरै productively र थप सजिलै देखिने हुनेछ।
किन्न वा खाना पकाउन?
तेजपात को लोशन - cosmetology को घर मद्दत गर्न एक राम्रो उपकरण। किनकी यो घटक वा जटिल प्रविधिहरू रसिद को एक ठूलो रकम आवश्यक छैन यो आफ्नै पकाउन सजिलो छ। साथै, घरेलू कस्मेटिक्स - यो सधैं प्राकृतिक सामाग्री, बिना हानिकारक छ "रसायन।" स्वाभाविक, त्यहाँ छ भने तेजपात आधारमा इच्छा कस्मेटिक्स तयार-गरे, जो कस्मेटिक उद्योग को उत्पादन किनेको गर्न सकिन्छ। तर यस्तो रकम छैन त, धेरै भन्दा अक्सर Laurel पात को आधारमा जोइन्टहरूमा लागि औषधि पसल मलम फेला छन्। व्यक्तिगत समय बस आधा घण्टा र नजिकैको स्टोरमा तेजपात मसला कार्ड दस rubles खर्च, आफ्नो कस्मेटिक्स Laurel बनाउन त सजिलो।
तपाईं संयोजन छाला छ भने
अनुहार लागि एसिड peels: समीक्षा। घर प्रयोगको लागि एसिड peels
सर्वेक्षण प्रकार, प्रयोग र प्रतिक्रियाको लागि निर्देशन: घर मा बाल हटाउनका लागि मोम। प्रक्रिया को सबै भन्दा राम्रो अभ्यासहरू र वर्णन - घर मा शुक्लपक्ष
ओठ छेड्नु र उहाँको उचित हेरविचार
कोरियाली बन्दागोभी रोल कसरी खाना पकाउनु
चेक गणतन्त्र मा स्की रिसोर्ट्स - एक उच्च स्तर र कम मूल्यहरु
पोषण को शरीर विज्ञान। पोषण को शरीर विज्ञान को आधारभूत
हामीलाई किन सैमसंग ग्यालेक्सी एस3को लागि रूट-अधिकार चाहिन्छ र सञ्चालकको प्राविधिक विशेषताहरू के हो?
पकौडी कसरी बनाउने
किन सामाग्री को लेखन-बन्द को कार्य भर्न?